Biden oo Safiir cusub usoo magacaabay Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Biden oo Safiir cusub usoo magacaabay Soomaaliya
Madaxweynaha Mareykanka Joa Biden ayaa qamiistii shalay waraaqad uu soo saaray ku magacaabay safiir cusub kaasoo baddali doona safiirkii hore ee mareykanka u fadhiyay Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa safiir cusub u soo magacaabay waddanka Soomaaliya, waxa uuna xilkii ka qaaday safiirkii hore ee dalka Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya Donald Yamamoto.
Madaxweyne Biden ayaa danjire Larry André Jr. u magacaabay inuu noqdo safiiirka cusub ee baddalay Yamamoto, waxaana danjiraha cusub uu kasoo shaqeeyay diblomaasiyadda in muddo ah, André ayaa ka mid ahaa 9 safiir oo uu xalay magacaabay madaxweyne Biden, kuwaas oo badankood loo magacaabay dalalka Afrika.
Danjire Larry André Jr waa dibloomaasi xirfad shaqo leh oo khibrad weyn ku leh Afrika. Waxaa loo magacaabay sagaal xafiis oo dibedda ah wuxuuna ka qabtay dhowr jagooyin sare dhammaan Waaxda Arrimaha Dibadda.
Hadda waxaa loo soo magacaabay safiirka cusub ee dowladda Mareykanka ufadhin doona Soomaaliya, waxa uuna kusoo aaday xilli kala guur ah oo waddanka Soomaaliya ay ka jirto xaalad jahwareer oo ka dhalatay doorashooyinkii baaqday iyo muddo kororsigii loo sameeyay hay'adaha dowladda iyo madaxweynaha JFS. Safiirka dowladda mareykanka oo ah mid awood badan ku leh siyaasadda dalka maadaama dowladda mareykanka ay taageerto dowladda Soomaaliya dhinac ciidan iyo dhaqaale intaba.